आज गणतन्त्र दिवस - Purba Pati
होमपेज / मुख्य समाचार / आज गणतन्त्र दिवस
शनिबार, जेठ १५, २०७८ , Purba Pati
दमक, १५ जेठ ।
आज जेठ १५ अर्थात गणतन्त्र दिवस । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो समयको संघर्ष र बलिदानीपछि २०६५ जेठ १५ गते प्राप्त गरेको गणतन्त्र आज १४ वर्षको किशोर अवस्थामा पुगेको छ ।
बिगतका वर्षहरुमा जस्तो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउन सक्ने स्थिति कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको संक्रमणका कारण सम्भव भएन । तर भर्चुअल र विभिन्न अनौपारिक माध्यमबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुने छन् ।
ऐतिहासिक जन आन्दोलन २०६२/०६३ को जनलहर थाम्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्दले वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते राति घुँडा टेके । जनान्दोलनको जनादेश बमोजिम वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो । वि.सं. २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजा र दरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो ।
त्यसपछिका राजनीतिक सहमति र सहकार्यहरुकै बलमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । त्यस संविधानमा सङ्घीयतालाई इन्कार गर्ने सात राजनीतिक दल र माओवादी पक्षको बेयमानी विरुद्ध ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह सुरु भयो ।
त्यसका अतिरिक्त संविधानसभाको निर्वाचन अघि नै विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आकांक्षा अनुसार स्वाशासन र स्वायत्तताको माग समेटिनुपर्ने लगायतका आवाजसहित आन्दोलनहरु भए । केही भूमिगत नाउँका संगठनहरुका लागि माओवादी विद्रोहकै नक्कल गर्दै चन्दा आतङ्कका गतिविधिहरु पनि भए ।
२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले गठन गरेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले विधिवत रूपमा २०६५ जेठ १५ गते नेपालबाट २४० वर्ष लामो निरंकुश शाहवंशीय परिवारिक जगमा स्थापित राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्यो र मुलुकलाई गणतन्त्रको आधुनिक युगमा प्रदेश गरायो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ताको मालिक नेपाली जनता नै भएको घोषणा गरियो भने राजकीय सत्तामा पनि नेपाली जनताकै छोराछोरीले पुग्ने पहिलो अवसर प्राप्त भयो । त्यसैको बलमा नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव चयन भए । राष्ट्रपति संवैधानिक रूपमा राष्ट्राध्यक्ष हुने परिपाटीको विकास भयो ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि वि.सं. २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ सालमै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएयता मुलुक आजको अवस्थामा छ । यतिबेला नेपालमा तीन तहको सरकार अभ्यासमा रहेको सङ्घीय शासन व्यवस्था छ । यो उपलब्धिका लागि गणतन्त्रको स्थापना नै प्रस्थानविन्दुका रूपा रहेको थियो ।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डहरुमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह, संघर्ष र आन्दोलनहरुको समष्टी नै नेपाली राजनीतिको रूपान्तरण सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो ।
गणतन्त्रको प्रार्दुभावले निरंकुश राजतन्त्रको समूल नष्ट मात्रै गरेको छैन । नेपाली जनताको स्वाधीन नेपाल र सर्वाभौसत्ताको मालिक हुने आकांक्षालाई पनि पूरा गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त १० वर्षे माओवादी विद्रोहलाई पेचिलो राजनीतिक अनिश्चितताको भूमरीबाट प्रणालीगत राजनीतिक अभ्यासमा ल्याएको छ । १० वर्षे जनयुद्धकालीन र त्यसपछि निर्माण भएका राजनीतिक डिसकोर्सहरुलाई अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्ने नयाँ राजनीतिक आन्दोलनहरुको निम्ति पनिमार्ग प्रसस्त गरेको छ ।